Tababare Solskjær oo hal arrin ka codsaday Taageerayaasha Man Utd, isagoo tusaale u soo qaatay Jurgen Klopp – Gool FM
(Milan) 24 Jan 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa farriin u diray taageerayaashiisa Red Devils, wuxuuna ka codsaday in ay samir muujiyaan, isagoo tusaale u soo qaatay macalinka naadiga Liverpool ee Jurgen Klopp.
46 sano jirkan ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor kulanka soo aadan ay kooxda Tranmere Rovers kula ciyaari doonaan koobka FA CUP-ka maalinta Axada ayaa lagu weydiiyay haddii ay u baahan tahay maal gashi xoog leh wuxuuna ku jawaabay.
“Aniga ahaan, waxaan haysanaa hab wax loo qabto”.
“Dabcan, waxaad arki kartaa kooxo kale oo qabanaya shaqo fiican”.
“Jürgen Klopp waxay ku qaadatay 4 sano dhisida kooxdiisa si wanaagsan ayeyna haatan u shaqeynayaan”.
“Marar badan ayaan sheegay nidaamka dib u habeynta ma noqon doonto mid deg-deg ah”.
“Uma gali doono 8 ama 10 ciyaartoy ee cusub suuqa kala iibsiga hal mar”.